Midabka cagaarka ah wuxuu qaadanayaa marxaladda dhexe ee Adolfo Dominguez | Bezzia
Midabka cagaarka ah wuxuu qaadanayaa marxaladda dhexe ee Adolfo Dominguez
Maria vazquez | | Maxaan xirtaa
Inkasta oo iibku aanu dhammaan, haddana waxa la joogaa wakhtigii la eegi lahaa soo jeedinta cusub ee shirkadaha. Haa, kuwa booska la wadaaga dharka la dhimay oo inta badan naga dhigaya inaan ka leexano yoolalkayaga. Waxayna tahay inay lama huraan tahay in la eego iyaga, sidii aan ku samaynay ururinta cusub ee Adolfo Dominguez.
Midab cagaaran Waxay ku qaadatay marxaladda dhexe ee Adolfo Domínguez. Iyada oo leh noocyo kala duwan, midabkani wuxuu soo jiitaa dareenka oo dhan oo ka mid ah novelties ugu dambeeyay ee shirkadda Isbaanishka. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka dhigno jilaayada boggayaga maalin waxaanan kugu martiqaadeynaa inaad nala soo baxdo aruurinta.
0.1 Midab cagaaran
up afar midab oo kala duwan cagaarka ayaa door hogaamineed ku leh ururintan cusub ee Adolfo Dominguez. Dhammaantood ilaa xad aqli badan ama ugu yaraan aan aad u iftiimin. Kuwa ugu mugdiga ah ayaa qabow mahad leh sarraynta buluugga; kuwa fudfudud, si kastaba ha ahaatee, way ka diiran yihiin oo ka sii acidic ah.
In qallafsanaantu waxay had iyo jeer ahayd dharka jilicsan ee shirkadda Isbaanishka. 100% polyester iyo qolof aan qudhun karin, sida ay ku qeexday shirkadda lafteeda, waxaad ka heli doontaa surwaal, funaanado, dharka iyo dhididka ka samaysan dharkan lagu shaabadeeyey motif «microchip». Laakiin ha u malayn in tani ay tahay dhar maalmeed, shirkaddu sidoo kale way ka go'an tahay munaasabadaha waaweyn.
ka dharka leh gacmaha dhererka suxulka iyo xariijimo yar oo dabcay oo ka samaysan naylon, iyo sidoo kale goonooyinka laga soo qaaday isla xariiqda, waxay noqdeen dharka muhiimka ah ee shirkadda si ay u macsalaameeyaan jiilaalka. Sidoo kale surwaalka leh silhouette labajibbaaran (waxay kuxirantahay inaad leedahay siibka hoose ee furan ama xiran), iyo jaakada qarxinta. Dharka isboortiga laakiin xarrago leh oo ku siin doona raaxada ugu badan ee nolol maalmeedkaaga.
Lama huraan waxay soo baxaysaa in sidoo kale diiradda la saaro suufka quilted iyo jaakadda naylon. Waxay leedahay dabool, dhererkiisu yahay 3/4, siibab kuleyl ku xiran oo leh jiide iyo suunka calaamadda la go'i karo. Kama bixi doontid marka ay lagama maarmaan noqoto in sidaas la yeelo waxa aad mishiinka ku dhaqi kartaa.
Ma jeceshahay soo jeedimahan Adolfo Domínguez kaas oo midabka cagaarka ahi uu qaadanayo marxaladda dhexe?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Midabka cagaarka ah wuxuu qaadanayaa marxaladda dhexe ee Adolfo Dominguez
Waxaan rabaa inaan noqdo hooyo faraxsan, caadooyinka lagu gaaro
Sida loo maydho bisadkayga hadduusan rabin